Malunga nathi-Chapman Technology Co., Ltd.
Wamkelekile kwi UMenzi weChapman inkampani, Yayisungulwa ngo-2008. Sineziqinisekiso SGS kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho ISO 9001.
Entsimini zomngundo, UMenzi weChapman ukhethekileyo ekuyileni nasekuveliseni zonke iintlobo zesikhunta seplastiki ngeHASCO, i-DME, i-LKM, iMISUMI esemgangathweni nohlalutyo lokuhamba komngundo. Sibonelela nge-DFM kubathengi ngeentsuku ezi-2 zokwakha ukungunda ngokusebenza kakuhle. Sinikezela ngemigangatho elungileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo kubathengi baphesheya ngengxelo yenkqubo yokuvelisa.
Intsimi yophuhliso lwemveliso, Masenze umbono wakho ube yimveliso ebonakalayo nethengiswayo. Sinomdla wokusombulula iingxaki ngohlalutyo olunzulu kunye noyilo olunengcinga. Ngobunjineli, uyilo, inkqubo, kunye nokwenza izinto ngaphakathi endlwini, akukho nto singenakuyenza.
UMenzi weChapmanunamandla afunekayo okugqiba iiprojekthi kwishedyuli, iseti-yezakhono zokujongana nenkqubo yophuhliso kangangoko ifunekayo, kunye neendlela ezintsha zokufumana izisombululo kwiingxaki ezinzima. Ngokudibanisa uyilo kunye nobunjineli kunye, sithatha izimvo ngakumbi, ngokukhawuleza, sinika abathengi bethu abaqhutywa ngabathengi, uyilo oluneemveliso phantsi kweeshedyuli ezixineneyo.
Ukucinga kwethu ngomfanekiso omkhulu kugcina iinjongo zakho ziphambili kwaye ziphakathi. Sinceda abathengi bethu bayile kwaye bazise kumava entengiso anyusa uphawu lwabo kwaye badlulele ngaphaya kweemfuno zabathengi. Unxibelelwano luyilelwe ukuba lunyanzelise kwinqanaba lomzimba nangokweemvakalelo kwaye sisiqinisekiso sezithembiso zabathengi bethu. Ujoliso lwethu lujolise kwiinjongo zokuphela kwabaxhasi bethu. Nokuba ziinjongo zeshishini, iinjongo zebrendi, okanye ishedyuli yeenjongo esisebenza ngokubambisana nabaxhasi bethu ukuze sizifezekise.
Sibonelela ngenkonzo yokumisa enye kubathengi ngokugqwesa izinto ezintsha, ukuyila, ubunjineli, ukuvelisa kunye namandla okuphatha kunye nexabiso lokhuphiswano.
"Ukudala ixabiso labathengi kwaye siligqibelele" yifilosofi yethu. Uyakuqonda inzuzo enkulu ngokusebenza kunye UMenzi weChapman!